- အလုပ်လုပ်နေပါတယ်ဆိုရုံလေး လူမြင်ကောင်းအောင် ၀တ်ကျေတမ်းကျေ အလုပ်လုပ်ပြတဲ့ စိတ်အမျိုးအစား။
- အလွယ်တကူ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေး စဉ်းစားရင် အဖြေထွက်နိုင်တာကို နေ့မအိပ်ညမအိပ် အကြီးအကျယ် ပုံကြီးချဲ့ပြီး မဆံ့မပြဲ ထုတ်သုံးနေတဲ့ မဆံ့အင်တန်စိတ်။
- ပြင်းထန်လွန်းစွာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ စိတ်ဆာလောင်နေသူအတွက် စိတ်အလိုဆန္ဒအတိုင်း အပြည့်အ၀ မဖြည့်ဆည်း ပေးနိုင်ရင် ကျေနပ်အားရမှု မဖြစ်တဲ့ စိတ်အနေအထား။
- သံသရာပြတ်ကြောင်းတရားကို လူအနေနဲ့သာ ကျင့်ကြံအားထုတ်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတော့ လူဖြစ်ခွင့်ရနေတုန်း ကျင့်နည်းတွေ ဘယ်လောက်ခက်ခက် ရအောင်ကျင့်မယ်။ ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ အနှောင့်အယှက်စိတ်တွေ မြှူဆွယ်စိတ်တွေ ဘယ်လောက်ပဲများများ အားလုံးကို ဖယ်ရှားပြီး ရအောင်ကျင့်မယ်။ လွတ်မြောက်ကြောင်း သေချာတဲ့ ကျင့်စဉ်အတိုင်း ရအောင်ကျင့်မယ်ဆိုတဲ့ တက်ကြွ ထက်သန်နေတဲ့ နောက်မဆုတ်စိတ်။
- အာရုံခြောက်ပါး ကိုယ်စီရှိတဲ့ လူနဲ့လူတွေကြားထဲမှာ အာရုံခြောက်ပါးကြောင့်ပဲ မတော်တဆစိတ်တွေ၊ အမှတ်မထင်စိတ်တွေ၊ ရုတ်တရက်စိတ်တွေ၊ မျှော်လင့်မထားတဲ့စိတ်တွေ၊ တိုက်ဆိုင်တဲ့စိတ်တွေဟာ အချိန်တိုင်းလိုလို ဖြစ်နေကျတွေပါပဲ။ မတော်တဆပဲဖြစ်ဖြစ်၊ တည့်တည့်ဝင်လာတာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ၀င်လာတဲ့ စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လိုနှလုံးသွင်းလိုက်လဲ? မိမိအသိက ဘယ်လို အနေအထား ပြောင်းရွှေ့သွားလဲ? ဘာစိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ် ၀င်လာတဲ့စိတ်ကို ထိတွေ့တဲ့အချိန်မှာ ဖြတ်နိုင်ရင်တော့ သက်သာမှာပဲ။
- မတော်လောဘစိတ်တွေ၊ မတော်မတရားစိတ်တွေဟာ မသင့်လျော်တဲ့ အဓိပ္ပာယ်တွေ ပါဝင်နေလို့ သန့်ရှင်း တည်ငြိမ်မှုကို နှောင့်ယှက် ဖျက်ဆီးမယ့် စိတ်အုပ်စုပဲ။
- ဘာမှမသိတာထက်စာရင် မတောက်တခေါက် တီးမိခေါက်မိလောက်တော့ သိတယ်ဆိုတာ တော်သေးတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် မတောက်တခေါက် အဆင့်မှာ ငါတော်တော်သိနေတာပဲလို့ ဘ၀င်မြင့်ပြီး ရပ်ထားရင်တော့ လက်တွေ့သိကျင့် နားလည်သဘောပေါက်တဲ့ အသိမျိုး မဟုတ်တဲ့အတွက် အသိ အသေးစားလေးသာ ဖြစ်နေမှာ။
- အလုပ်တစ်ခုလုပ်ဖို့ သေချာရေရာ တိကျတဲ့ အဖြေမထွက်ရင် ပြတ်ပြတ်သားသား ဆုံးဖြတ်လို့မရတဲ့ စိတ်အခက်အခဲ။
- လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းထဲမှာ လူလူချင်းအပြန်အလှန် ထားပေးရမယ့် စိတ်စည်းကမ်းဆိုတာရှိတယ်။ တစ်ယောက်ယောက်က အဲဒီ အကန့်အသတ်ထက် ကျော်လွန်နေရင် တခြားတစ်ဘက်မှာ လက်ခံယူဖို့ အခက်အခဲ ဖြစ်နေတတ်တယ်။